Dash bụ otu n'ime ego di na weebu gbadosiri ụkwụ ike n'ime cryptocurrency enwere. ọ werela ọnọdụ onye nke iri na ime cryptocurrency nile di n' uwa, bia kwa nwee azumahia ijeri isii ma na azuta kwa narị nde abụọ na ụbọchị. Dash bu nnukwu ihe bia nwe kwa ọtụtụ uru n'ime ya.
Na isi Mbido Enwere ọchịchịrị E weputara DAsh na Jenụwarị 2014, oge ahu ọ bụ Darkcoin, onye no na isi oche ya mgbe ahu bu Evan Duffield. Eji otu afo gbanwe aha ya bụrụ Dash. Dash nwere ọtụtụ ihe mere ya ọpụrụ iche banyere ego cryptocurrency ndi ọzọ, ike goomenti elughi ya, ọnwe kwara etu ndi mmadu ga esi zigara onwe ha ego ogaghi egosi aha ha.
ọrụ Dash ka na ga n'ihu, ndi Dash Core bu otu na ahu maka ya. Ugbua mmadu iri atọ bụ ndi ụlọ ọrụ ha…